Warar - Ku saabsan suuxdinta deegaanka
Suuxdinta maxalliga ah (suuxdinta maxalliga ah) waa hab si ku-meel-gaar ah looga horjoogsanayo soo-wadidda neerfaha ee aag ka mid ah jirka si loo soo saaro suuxdinta, oo loo yaqaan suuxdinta maxalliga ah.
Marka la barbardhigo suuxdinta guud, wax saameyn ah kuma yeelaneyso maskaxda, waxayna sidoo kale yeelan kartaa shahaado cayiman oo xanuun joojinta qalliinka kadib ah. Isla mar ahaantaana, way fududahay in la shaqeeyo, ammaan ah, oo leh dhibaatooyin ka yar. Saameyn yar ayey ku leedahay shaqooyinka jir ahaaneed ee bukaanka waxayna xannibayaan neerfaha xun ee kala duwan. falcelin.
Isticmaalka daroogooyinka xidha dareenka xididdada si loo kabo suuxdinta qayb ka mid ah jirka waxaa loo yaqaan suuxdinta maxalliga ah. Marka dareemaha dareenka xannibmo, xanuunka iyo dareenka maxalliga ah waa la xakameynayaa ama la waayey; marka dareemaha mootada la xannibo isla waqtigaas, dhaqdhaqaaqa muruqyada ayaa daciifa ama si buuxda u dabacsan. Xannibaaddaani waa mid ku meel gaar ah oo gebi ahaanba dib loo noqon karo.
Suuxdinta maxalliga ah way fududahay oo way fududahay in la hirgeliyo, ammaan ah, waxay ka dhigi kartaa bukaanka inuu soo jeedo, wax yar buu farageliyaa howlaha jireed, wuxuuna leeyahay dhibaatooyin ka yar. Waxay ku habboon tahay hawlgallada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee leh xaddidaadaha dusha sare. Si kastaba ha noqotee, markii loo adeegsado hawlgallo ballaaran iyo qoto dheer, xanuun joojiyaha badanaa kuma filna, nasashada murqaha ma fiicna. Suuxdinta aasaasiga ah ama suuxdinta kaabayaasha ah waa in loo adeegsadaa bukaannada aan sahlaneyn in lala shaqeeyo, gaar ahaan carruurta, sidaas darteed baaxadda dalabku way xadidan tahay. Suuxdinta maxaliga ah ee badanaa la isticmaalo waa esters sida procaine, tetracaine iyo amides sida lidocaine. Si loo isticmaalo suuxdinta maxalliga ah si badbaado leh oo habboon, mid waa inuu bartaa cilmiga dawada ee suuxdinta maxalliga ah, anatomiga neerfaha ee durugsan, iyo mabaadi'da aasaasiga ee suuxdinta.
Marka la barbardhigo suuxdinta guud, suuxdinta maxalliga ah waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah dhinacyada qaarkood. Ugu horreyn, suuxdinta maxalliga ah wax saameyn ah kuma yeelaneyso miyirka; marka labaad, suuxdinta maxalliga ah sidoo kale waxay yeelan kartaa heer cayiman oo xanuunka joojiya qalliinka kadib; marka lagu daro, suuxdinta maxalliga ah way fududahay in la shaqeeyo, amaan ah, waxayna leedahay dhibaatooyin yar, waxayna saameyn yar ku leedahay shaqada jir ahaaneed ee bukaanka, taas oo hor istaagi karta Waxay jari kartaa falcelisyada neerfaha ee kala duwan, waxay yareyn kartaa jawaabta walaaca ee ay keento dhaawacyada qalliinka iyo soo kabasho deg deg ah.
Si kastaba ha noqotee, suuxdinta maxalliga ah iyo suuxdinta guud inta badan waxay iska kaashadaan kiliinig ahaan, labadan hab ee suuxdintu gabi ahaanba lama go'doomin karo. Taabadalkeed, waa in loo tixgeliyaa inay qayb ka yihiin qorshaha suuxdinta shakhsi ahaaneed ee bukaannada gaarka ah. Carruurta, bukaanka dhimirka ka jiran ama miyir la'aanta, suuxdinta maxalliga ah looma isticmaali karo kaligeed si loo dhammaystiro qalliinka, suuxdinta aasaasiga ah ama suuxdinta guud waa in lagu kabo; suuxdinta maxalliga ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa iyada oo loo adeegsanayo kaaliyaha suuxinta guud si kor loogu qaado saameynta suuxdinta loona yareeyo qadarka suuxinta guud.